दोहोरी खेलेर भाइरल भएकी कमला घिमिरेको पहिलो गीत यस्तो बन्यो ! – दैनिक नेपाल न्युज
दोहोरी खेलेर भाइरल भएकी कमला घिमिरेको पहिलो गीत यस्तो बन्यो !
युटुबमा सर्बाधिक रुचाएकी कमला घिमिरेले आवाज दिएको पहिलो गीत बजारमा आएको छ । कमलाले गाएको पहिलो गीत शुभारम्भ डिजिटल म्युजिक प्रालिले लगानी गरेको छ । कमला घिमिरे संगै अमृत सापकोटाले उक्त गीतमा आवाज दिएका छन।अमृत सापकोटालेनै उनलाई मिडियामा ल्याएका थिए ।
सानै उमेरमा उनले गाएको गीतले लाखौ दर्शक नजिकिएका थिए । १ करोड भन्दा बढीले दोहोरीने हेरिसकेका छन कमला घिमिरेको । कमला घिमिरेको उक्त गीतको प्रस्तुतकर्ता भने शम्भु कुँवर हुन् । चर्चित सर्जक रमेश बिजिको शब्द र अर्का चर्चित गायक तथा सर्जक खेम सेन्चुरीको लय रहेको गीतमा नेपालका चर्चित चर्चित मोडलहरुले नृत्य समेत गरेका छन । शंकर बिसीको निर्देशन रहेको भिडियोको छायांकन भने दुर्गा पौडेल र सुरेश श्रेष्ठले गरेका हुन् । भिडियो सम्पादन भने बिकाश ज्ञावालीले गरेका छन।भिडियो अहिले निकै भाइरल भएको छ । गीत हेरौ :